Iitemplate ezingama-37 zediploma kunye nezatifikethi asimahla | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Lola ifani | | Izibonelelo, itemplates, Tutorials
Sibuya noluhlu lweetemplate zasimahla kunye ne Useto olwenziweyo kwezi diploma zihlala zinikezelwa ekupheleni kwekhosi kwaye oko kuhlala kuqinisekisa inqanaba lezifundo ezigqityiweyo. Indlela yokubonisa ngokucacileyo ukuchitha ixesha elithile uzivocavoca kwisifundo esithile ukuze ube nesiseko esaneleyo sokufikelela kubuchwephesha ngendlela engcono.
Ngesi sizathu, siza kwabelana nawe ngeetemplate ezingama-35 kuzo zonke iintlobo zediploma, phakathi kwazo onokufumana inani elifanelekileyo lokwahluka ukuze ufumane olugqibeleleyo lomsebenzi ochaphazelekayo. Inkqubo ye- kukho isikolo, isikolo semfundo okanye ezinye zezo zikhuphiswano ezenziwa kumadama okuqubha ukugcina abantwana abonwabileyo endlini kwaye bonwabile. Sikwabandakanye isifundo apho sichaza, inyathelo ngenyathelo, uyenza njani idiploma kwi-PowerPoint.
1 Ukukhethwa kweetemplate zediploma
1.1 Isatifikethi sombulelo kwisitayile seediliya
1.2 Isatifikethi segolide esidala sokuvunwa
1.3 Idiploma yevintage enesakhelo sokuhombisa
1.4 Isatifikethi sokunethezeka esineenkcukacha zegolide
1.5 Isatifikethi sokuphumelela
1.6 Isatifikethi esimangalisayo soxabiso kunye neMilo yeJometri
1.7 Uyilo lweetemplate zesatifikethi
1.8 Isatifikethi sephepha elinombala oluhlaza setemplate
1.9 Isatifikethi sokunethezeka
1.10 Isatifikethi sokwamkelwa ngoBomvu oonxantathu
1.11 Isatifikethi sokuphumelela ngombala opheleleyo
1.12 IDiploma enesakhelo esiqhelekileyo
1.13 Itemplate yediploma yabantwana enemibala
1.14 Isatifikethi sihonjiswe ngemilo eblowu kunye nemigca yegolide
1.15 Umzobo we clipart ophumeleleyo kumzobo
1.16 Ithempulethi yediploma ye-wavy
1.17 Isishwankathelo semigca yesatifikethi
1.18 Itemplate yediploma yasekholejini
1.19 Imvelaphi yeencwadi ezinediploma kunye nodaka
1.20 Idiploma entle enetywina
1.21 Isatifikethi semibala emthubi nepinki
1.22 Itemplate yesatifikethi sokuhombisa
1.23 Idiploma entle eneenkcukacha zokuhombisa
1.24 Isatifikethi esineemilo eziluhlaza zejiyometri
1.25 Uyilo lweziqinisekiso zale mihla ngobume obubomvu nobumnyama bejometri
1.26 Idiploma entle yabantwana
1.27 Itemplate yeDiploma eneeleta ezinemibala
1.28 Inkwenkwe yediploma enabantwana abahlekisayo
1.29 Isatifikethi sokuthweswa isidanga ngoonxantathu abebala
1.30 Isatifikethi esinesakhelo segolide sokuhombisa
1.31 Isiqinisekiso seTemplate sidiliziwe
1.32 Idiploma entle enesakhelo sokuhombisa
1.33 Isatifikethi sanamhlanje
1.34 Itemplate yediploma yeediliya
1.35 Idiploma yokuhombisa yokufaneleka kunye nesakhelo esiqhelekileyo
2 Kuphi ukwenza iidiploma zasimahla
2.1 Isixhobo sokubumba
2.2 Dlala ngokudityaniswa kwendalo kunye nolawulo oluphezulu
2.3 Ungasayina ngaphandle kokushiya inkqubo
3 Uyenza njani idiploma ebonakalayo
3.3 Izatifikethi eziyi-1,2,3
Ukukhethwa kweetemplate zediploma
Isatifikethi sombulelo kwisitayile seediliya
Este isatifikethi sesitayile sokuvuna Yindlela yodidi kunye nenhle kakhulu, idiploma elungileyo yokuqinisekisa imicimbi enzulu nesesikweni.
Isatifikethi segolide esidala sokuvunwa
Olunye ukhetho lweklasikhi kunye nesitayile, indlela isatifikethi segolide esidala Lukhetho olufanelekileyo ukuba ujonge idiploma ehambisa ubuhle kunye nokuzikhethela.
Idiploma yevintage enesakhelo sokuhombisa
Ukuba awuyiyo igolide eninzi kunye neetoni eziqaqambileyo apha unayo enye indlela, a idiploma yokuvuna ngesakhelo sokuhombisa kwiithoni eziluhlaza, ngokudityaniswa kweskripthi kunye nohlobo lweserif, zilayishwe ngobuhle.
Isatifikethi sokunethezeka esineenkcukacha zegolide
Este isatifikethi esineenkcukacha zegolide Yimbonakalo yobunewunewu, uyilo oludala kodwa oluchukumisayo. Kwiithoni ze-beige kunye nendibaniselwano enomdla kakhulu yeefonti kunye neefonti ze-sans-serif.
Este Isiqinisekiso sokuphunyezwa kwempumelelo Le yenye yezona zikhetho zisemthethweni kule ngqokelela, ileta ebomvu ebomvu yahlukile kwi-beige kunye neetoni eluhlaza zoyilo ezilunika umahluko wokwahlula.
Isatifikethi esimangalisayo soxabiso kunye neMilo yeJometri
Este isatifikethi esekwe kwiimilo zejiyometri lukhetho lolutsha kunye nolwanamhlanje. Ukusetyenziswa kombala kunye ne-sans-serif typeface etyebileyo ehlala kwindawo ephambili kuyinika ukujonga okwangoku.
Uyilo lweetemplate zesatifikethi
Okunye idiploma entle, ilula kunezangaphambili. Igolide ngumbala ofanelekileyo wokunikezela uyilo olucokisekileyo nolwahlukileyo kuyilo
Isatifikethi sephepha elinombala oluhlaza setemplate
Este idiploma ehonjiswe ngeemilo zejiyometri Kwiithoni eziluhlaza lukhetho oluhle kwaye lwangoku oluya koyisa ngokuqinisekileyo. Uyilo lubhetyebhetye kwaye lunokusebenza phantse kuyo nayiphi na imeko.
Ukudityaniswa komnyama kunye negolide kuyinto entle kakhulu kwaye yahlukile. bucala ngasekhohlo isatifikethi esihle Olukhetho olukhangelayo ukuba ufuna idiploma yanamhlanje, kodwa kwangaxeshanye uhambisa isimilo esithile esisemthethweni nesikhethekileyo.
Isatifikethi sokwamkelwa ngoBomvu oonxantathu
Okunye isatifikethi sangoku kunye nenhleUmbala unika ulutsha ngakumbi kwaye ubenomtsalane kwesi siqinisekiso sokubonga ngoonxantathu abomvu.
Isatifikethi sokuphumelela ngombala opheleleyo
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka notyheli, imibala ephambili yoyilo, idityaniswa ngokugqibeleleyo. Ephuzi, umbala ofudumeleyo, kunye nohlaza okwesibhakabhaka, umbala obandayo, batshata ngokugqibeleleyo kwaye bayaphelelisana ngokugqibeleleyo. Kule Isiqinisekiso sokuphumelela ngombala opheleleyo Olu dibaniso lubalulekile ekudaleni uyilo lwangoku kunye nolunqabileyo.
IDiploma enesakhelo esiqhelekileyo
Ukuba ukhetha umbala ongaphantsi, esi sisiqinisekiso osikhangelayo. bucala ngasekhohlo idiploma enesakhelo esiqhelekileyo Inoyilo oluncinci, ukhetha imibala emibini kuphela, emnyama ekukhanyeni, eyinika ukujonga okucocekileyo.
Itemplate yediploma yabantwana enemibala
Ukuba ujonga isatifikethi somntwana ngakumbi, le modeli idiploma yabantwana uyilo olumbala kakhulu uya kulithanda. Iya kuba luncedo kakhulu ukuba, umzekelo, uyazinikela ekufundiseni kwaye ufuna ukunika ibhaso elikhethekileyo kubafundi bakho.
Isatifikethi sihonjiswe ngemilo eblowu kunye nemigca yegolide
Idiploma entle kakhulu, cIsatifikethi esihonjiswe ngeemilo eziluhlaza kunye nemigca yegolide ikhupha ubuhle kunye nencasa elungileyo. Uhlobo lwe-sans-serif typeface, enobukhulu obahlukeneyo, nika le modeli ukubukeka kwangoku.
Umzobo we clipart ophumeleleyo kumzobo
Esinye isixhobo esikhulu sokufundisa. Le diploma Inenkangeleko emnandi kwaye abantwana baqinisekile ukuyithanda. Ukhetho lochwethezo lubonakala kum luphumelele kakhulu kwaye imizobo inika uyilo lokuyila.
Ithempulethi yediploma ye-wavy
Este idiploma kunye noyilo kwiithoni eziluhlaza kunye noluhlaza okwesibhakabhaka ngokusekwe kwimilo egosogoso lolona khetho lubalaseleyo, oluneenkcukacha kunye nezinto ezahlukeneyo.
Isishwankathelo semigca yesatifikethi
Ukuyila esi siqinisekiso Iyamangalisa kwaye iyile, indibaniselwano yeemilo iyinika intshukumo ethile eyenza ukuba ibe lukhetho olwahluke kakhulu kunolo lwangaphambili.
Itemplate yediploma yasekholejini
Olu luyilo lubuntwaneni kwaye luyonwabisa, imizekeliso ilunge kakhulu kwi-a idiploma yasekholejini kwaye imibala iqinisekile ukubamba ingqalelo yomncinci. Imibala eyahlukeneyo yokuchwetheza Yimpumelelo enkulu kule meko!
Imvelaphi yeencwadi ezinediploma kunye nodaka
Kule meko sikuphathela itemplate yokuvuyisana nabahlobo bakho, oogxa kunye nosapho ngokuthweswa kwabo isidanga. Inkqubo ye- imvelaphi yeencwadi ezinediploma kunye nodaka kufanelekile kakhulu kulo msitho.
Idiploma entle enetywina
Indibaniselwano yegolide, tyheli kunye nesaphetha esibomvu esijingiswe kwiletahedi le diploma ukhetho oluhle kunye nesitayile.
Isatifikethi semibala emthubi nepinki
Este Isatifikethi kunye noyilo lweplogonal ngombala otyheli nepinki Olukhetho luhle kakhulu ukuba ujonge idiploma enemibala, yanamhlanje kunye nolutsha.
Itemplate yesatifikethi sokuhombisa
Olunye lolona khetho lubalaseleyo kule ingqokelela, le Itemplate yesatifikethi sokuhombisa Isiphumelele ngobuhle bayo kunye nokubonakala kwayo kweklasikhi.
Idiploma entle eneenkcukacha zokuhombisa
Olunye uyilo kwiithoni zegolide, a idiploma entle elayishwe ngeenkcukacha zokuhombisa, Zifanele ukuhanjiswa ngamaxesha amisiweyo nasesikweni.
Isatifikethi esineemilo eziluhlaza zejiyometri
Este isatifikethi esineemilo zejiyometri Kwiimibala ezahlukileyo eziluhlaza kunobuhle kodwa ngothintelo olukhululekileyo nolutsha.
Uyilo lweziqinisekiso zale mihla ngobume obubomvu nobumnyama bejometri
Ukuba u khangela uyilo lwangoku olunemibala emibala, olu dibaniso lweemilo zejiyometri ezibomvu nezimnyama ziya kukuonwabisa.
Idiploma entle yabantwana
Este idiploma entle yabantwana ilayishwe ngemifanekiso yoyilo yitemplate elungileyo kakhulu, enoyilo olunemibala eqaqambileyo kunye nolonwabo.
Itemplate yeDiploma eneeleta ezinemibala
Olunye uyilo lwabancinci, oku itemplate yediploma eneeleta ezinemibala Lukhetho ngokulinganayo nangona licocekile, lilayishwe kancinci. Kule meko, bakhethe ukudibanisa imibala ethambileyo enika esi satifikethi ukuchukumisa okwahlukileyo.
Inkwenkwe yediploma enabantwana abahlekisayo
Le diploma uyilo olufanelekileyo oluhambisa uvuyo kunye namandla. Isakhelo esimthubi esingqonge uyilo silunika uchukumiso lwala maxesha kwaye indibaniselwano yohlobo olujikeleziweyo lwemibala eyahlukeneyo yongeza olo lonwabo lokuba isatifikethi esenzelwe abantwana kufuneka babenaso.
Isatifikethi sokuthweswa isidanga ngoonxantathu abebala
Olu lolunye loyilo oluthanda kakhulu kule ngqokelela, lulutsha kwaye lunokusetyenziselwa abantwana kunye nabantu abancinci. Indibaniselwano yeemilo zejiyometri kunye nephalethi yombala yenza isatifikethi sokuthweswa isidanga kukhetho olukhulu lokuyila kunye nenqaku loyilo lwegraphic ongalithandiyo.
Isatifikethi esinesakhelo segolide sokuhombisa
Este Isatifikethi sihle kakhulu kwaye sisesikweniOlona phawu lubalaseleyo loyilo sisakhelo sokuhombisa segolide esisombulula isicatshulwa kwaye sigqityiwe ngokuhombisa okusihombisayo.
Isiqinisekiso seTemplate sidiliziwe
Lo itemplate yesatifikethi ilandela uyilo lweklasikhi kunye noluncinci kunye nokuchukumisa okuthile kweediliya, lukhetho oluchanekileyo, olusebenzayo phantse kuyo nayiphi na imeko, impumelelo okanye umsitho. Iletahedi ebomvu yongeza ukubamba umbala kwidiploma.
Idiploma entle enesakhelo sokuhombisa
Olu khetho lweklasikhi kwithoni ebluhlaza Olukhetho oluhle kakhulu, uyilo lulungelelene kakhulu kwaye ubume bemvelaphi buyinika ukubamba okwahlukileyo. Ukuba ufuna isatifikethi somsitho osesikweni le diploma intle kangaka enesakhelo sokuhombisa yile nto uyifunayo.
Ukudibanisa i-salmon kunye ne-turquoise eluhlaza okwesibhakabhaka yibhombu, esi siqinisekiso sanamhlanje Ifezekile ukuba ujonge idiploma yangoku, yolutsha kunye nesitayile.
Itemplate yediploma yeediliya
Este itemplate yediploma yeediliya Olunye ukhetho oluhle kakhulu kwaye luhle, imvelaphi enemigca efihlakeleyo kunye nokungafani nezinto ezimnyama ziyenza uyilo olunomdla.
Idiploma yokuhombisa yokufaneleka kunye nesakhelo esiqhelekileyo
Este ukufanelekela idiploma ngesakhelo esiqhelekileyo Ilandela uyilo olulula kodwa oluhle kakhulu ngokuthe nkqo, olunezinto ezisisiseko zokuhombisa ukuyenza uyilo lobuhle ngokudibanisa okuhle kakhulu.
Kuphi ukwenza iidiploma zasimahla
Ukuba ufuna ukwenza iidiploma zakho mahala, IPowerPoint lukhetho oluhle kakhulu. Le nkqubo, eyilelwe ikakhulu ukwenza intetho, ibonelela ngezixhobo eziluncedo kakhulu kuwe ukuze wenze ngokulula uyilo lwakho.
Ngesixhobo seemilo, esifumaneka kwithebhu yokufaka, ungongeza izinto zemizobo eya kwenza uyilo lwakho lube nomtsalane ngakumbi. Ngapha koko, ungazenza ngokwezifiso kwiifomati ze- «ukuma kwefomathi» kwaye uye kwi «guqula amanqaku» ukhetho onokwenza iimilo ezingaqondakaliyo. Ukudibanisa iimilo ezahlukeneyo, ukudlala ngombala, ubungakanani kunye namagophe unokwenza idiploma okanye izatifikethi zentsusa. Unokongeza iigradients, ukunika ivolumu kulwakhiwo.
Dlala ngokudityaniswa kwendalo kunye nolawulo oluphezulu
Imigca inexabiso elisisiseko Kuyilo. Kuxhomekeke kwintsingiselo yediploma, unokukhetha indibaniselwano yokuchwetheza okanye ezinye. Ukuba uza kwenza idiploma yokuhambisa isikolo kwisikolo sabantwana, umzekelo, unokusebenzisa iifonti ze-sans-serif ngesandla, kwaye uzidibanise ngemibala eqaqambileyo kwaye evuya. Kwelinye icala, ukuba sisatifikethi esinzulu ngakumbi kwaye sihle, unokukhetha ukudibanisa uhlobo lwe-serif typeface kunye ne-sans-serif typeface. Ukuba ufuna ukukhuthazwa ukufumana ukhetho olugqibeleleyo, ungahlala ujonga ezinye ze indibaniselwano yokuchwetheza esikucebisayo.
Ukongeza ekunikeni ingqalelo uhlobo lochwethezo, kubalulekile ukuba udlale ngobungakanani kunye nobukhulu beefonti ukuseka ulawulo. Ukuba uyaphumelela, idiploma yakho iya kucaca ngakumbi kwaye ke ngokubonakalayo kunomtsalane.
Ungasayina ngaphandle kokushiya inkqubo
Kwiinguqulelo zamva nje zePowerPoinUnayo «ukuzoba» ithebhu ekhoyo. Esi sixhobo sikuvumela ukuba wenze ngokulula imivumbo yasimahla. Inika iintlobo ezintathu zebrashi: usiba, ipensile kunye nokuqaqamba. Ukuqwalaselwa kwazo zonke kunokuhlengahlengiswa ukuze ungenza ngokusesikweni ubukhulu kunye nombala.
Esi sixhobo sinokuba iluncedo ekuhombiseni isatifikethi sakho, ngakumbi ukuba uyakwazi ukuzoba, kodwa eyona nto inomdla kukuba enkosi kuyo Uyakwazi ukusayina idiploma ngaphandle kokuyeka inkqubo. Kuya kufuneka ukhethe ipeni emnyama, enendawo entle, kwaye utyobele uxwebhu.Uya konga ixesha elininzi!
Uyenza njani idiploma ebonakalayo
IPowerPoint ayisiyiyo kuphela inketho yokwenza iidiploma, onokuyenza iidiploma ezibonakalayo ngaphandle kwesidingo sokufaka nayiphi na inkqubo. Nazi ezinye izixhobo eziluncedo kakhulu ukwenza izatifikethi ezikwi-Intanethi. Into elungileyo kukuba bakhululekile ngokupheleleyo.
I-Canva sisixhobo esenziwe kwi-Intanethi kunye nokudala umxholo odalekayo. Inika iitemplate phantse yonke into kwaye, ewe, uya kufumana kwakhona iitemplate zazo zonke iintlobo zezatifikethi. Ukuba sisixhobo sasimahla ungakhetha itemplate oyifunayo, uyihlele kwaye uyenze ngokwezifiso ngaphandle kokushiya iwebhusayithi. Sebenzisa injini yokukhangela ukumisela uhlobo lwesatifikethi osifunayo kunye nokufumana iingcebiso ezingcono. I-Canva ikwanayo nenguqulelo yepro, nangona inezixhobo zenguqulo yasimahla onganeleyo, nje Nika ingqalelo kwaye ungasebenzisi iitemplate ezithintelweyo efuna intlawulo.
Kule webhusayithi uza kuyifumana imifuziselo ezahlukeneyo zediploma. Eyona nto inomdla kukuba ukongeza kwi ikuvumela ukuba uzikhuphele kwi-PDF ukuprinta kwaye uzigqibezele ngesandla, ikunika kwakhona ukhetho lokugcwalisa ngokuthe ngqo kwiwebhu ukukhuphela ingxelo yokugqibela.
Nangona iwebhusayithi kunye neetemplate zibhalwe ngesiNgesi, nge Izatifikethi eziyi-1,2,3 Ungahlela isicatshulwa seetemplate ke oku akuyi kuba yingxaki. Into endiyithandayo kakhulu kule webhusayithi ukwenza izatifikethi ezibonakalayo kukuba iidiploma zi-100% ziyahlelwa: ungakhetha imibala, ubungakanani, ukuqhelaniswa, ubuchwephesha kunye nokongeza eyakho imifanekiso Kusimahla kwaye kulula ukuyisebenzisa!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » itemplates » Iitemplate ezingama-37 zasimahla zediploma
Ukudityaniswa nje okumangalisayo!
Ngexesha elidlulileyo ndenze into efanayo, kodwa ndithatha umnqwazi wam kumgangatho weposi, indlela yoku-odola izihloko kunye nokuqokelelwa kweediploma.
Kungumona ophilileyo haha ​​... Ndiyabulisa!
Ndiyabulisa ku-Esteban! Ndiyathanda ukuba uyakuthanda ukudityaniswa!
Enkosi, igalelo elingaqhelekanga kubaphulaphuli. Iifomati ezigqwesileyo zeDiploma kunye nezatifikethi, azifumananga ezingcono. Ndinika iinkwenkwezi ezili-10 kunye nendalo iphela. Eneneni ndinombulelo kakhulu.
Luis lopez Avalos sitsho
yingqokelela ebalaseleyo, epheleleyo, eqondisiweyo kwaye efanelekileyo kakhulu. Ndiyabulela kakhulu. UGqr Luis lopez
Phendula uLuis lópez Avalos
URicardo R sitsho
Ndiyabulela kakhulu!! kucetyiswa kakhulu!
Phendula uRicardo R
EDWIN QUISPECURO NINA sitsho
NDINOMDLA KAKHULU KWI-TERPIFICATE TEMPLATES.
Phendula u-EDWIN QUISPECURO NINA
Molo uThixo akusikelele nceda ndifuna ukuba undikhokele ndenze idiploma ngesakhelo, kwaye ndinemvelaphi ecacileyo yebhayibhile evulekileyo enkulu kwaye ndingabhala ulwazi oluthweleyo ngaphandle kwengxaki. ENKOSI
Molo, ndinombuzo ofanayo nalowo ubuzwe yile ntombazana, ndizama ukwenza into efanayo kwaye andinakubulela.
Ngaba zizekelisa kuphela? kutheni isithi simahla? ngekhe uzikhuphele kwaye uzisebenzise.